Kanal Istanbul, Jasiiradda Galbeedka Istanbul iyo khataraha juquraafi | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulKanal Istanbul, Jasiiradda Galbeedka Galbeedka iyo khatarta geopolitical
15 / 01 / 2018 34 Istanbul, tareenka, GUUD, TURKEY
Mashruuca Kanal ee Istanbul waxaa loo qoondeeyay mashruuc mashruuc Crazy Project ah oo uu soo saaray xisbiga talada haya iyo April ee 2013 go'aanka Golaha Qorshaynta Dheer ee mashruuca. Hadaladii ugu dambeeyay ee ay soo saareen xukunka, waxaa la fahamsan yahay in marxaladda koowaad ee mashruuca 2018 uu gaaray heerkiisii ​​ugu dambeeyay. Iyada oo mashruucan bedelay joqraafiyada jir ahaaneed, Galbeedka Istanbul hadda waa jasiirad. Xiriirka tooska ah ee xayawaanka ee Thrace ayaa la gooyaa. Jasiiradda Galbeedka Galbeedka waxaa lagu sharxi doonaa jasiiradda jasiiradda u dhaxaysa Aasiya iyo qaaradda yurub ee galbeedka. Sida laga soo xigtay wargeyska wargayska SABAH, waddada Kanal Istanbul waxaa loo doortay loona doortay mid ka mid ah beddelka 5. Sida ku xusan warbixintaan, 45,2 waxay ka bilaabi doontaa Lake Kucukcekmece Lake oo dhex marta Altinsehir iyo Sahintepe. Intaa waxaa dheer, ee Badda Marmara, 3 dabiiciga ah ayaa lagu dhisi doonaa Black Sea Thrace iyadoo la isticmaalayo qodista. Mashruuca 65 bilyan doolarka wuxuu sidoo kale ku talajiraa dhismaha dekedda maraakiibta Marmara iyo Badda Madiinka oo ka soo baxa kanaalka. Sida laga soo xigtay macluumaadka aan ka baranay saxaafadda, Thrace waxay ku xirnaan doontaa buundada 6. Intaa waxa dheer, biriijka 6 ayaa loo sameyn doonaa xayawaanka duurjoogta ah.
ILAALINTA GEOPOLITICS OF WESTERN ISTANBUL ISLAND
Marka channel ee wajihi doona Turkey ee Istanbul shan sano ka dib markii la xoqo dhamaystirka leh xaqiiqada cusub geopolitical. Aan eegno qaab-dhismeedka qaabka hore. Qeybta 1600 ee Jasiiradda Galbeedka Galbeed waxay u baahan tahay difaac cusub oo amniga iyo ammaanka ah oo leh 8 million kilomitir square, dadka 5000. Ugu horreyntii, Galbeedka Galbeedka Istanbul waa kuwa ugu badan ee ku nool Yurub; Waxay noqon doontaa mid ka mid ah jasiiradaha ugu caansan ee ku yaalla dunida. Haddii aan xusuusinno in dadka 4500 ay ku dhacaan kiiloomitir kilomitir Singapore, gobolka jasiiradda, Singapore ee Galbeedka Galbeedka Istanbul; ama in 2500 halkii kilomitir oo isku wareeg ah ay dhaafi doonto jasiiradda Shiinaha ee Macao. Galbeedka Galbeedka Galbeedka wuxuu ku xirnaan doonaa Yurub iyadoo la adeegsanayo buundooyinka 6 waxaana lagu xirayaa seddex buundo oo hadda jira iyo laba tunnel. Gaadiidka, cuntada, dhammaan noocyada alaabada adeegsiga ee loo baahan yahay dad badan oo kala duwan, iyo noocyada kala duwan ee waxqabadka nolosha aadanaha ayaa adeegsan doona buundooyinkan iyo jaangooyooyinka sida halbowlayaasha waaweyn. Haddii khadadka xirmooyinka laga furo kanaalka, miyuusigga 8 ee deggan jasiiradda ma awoodi doonaan inay galaan dhulka Thracian. Wareegga mitirka 150 iyo kanaalka weyn ee biyaha ee qoto-dheer ee 25 ayaa ka hortagi doona marinkaas. (Xaddidaadda loo sameeyay qaab-istiraatiijiyad militari ayaa noqon doonta arrin gaar ah.)
oo halis ugu dhaw waayo jasiiradda, taas oo si toos ah saamayn on güveliği qaranka '' dhulgariir '' ka dibna u dhowaan ku xiran ee masiibooyinka diyaarad. Width iyo height gudaha mitir 150 25 ee mitir oo biyo ah, oo colal ku mugga la taaban karo ka buuxsamay, ayaa la filayaa in Dhulgariirka xumeeyayna ee jidka tamarta saamayn doono dillaac qalad dhici doona dhibkani talona ah; Ma ogtahay saameynta suurtagalka ah ee isbeddelka jeermiska ee laga sameeyay gobolka ee degsiimooyinka si loo dhiso gudaha iyo hareeraha kanaalkan? Miyay aqoonyahaniintu u samaysteen moodeel? Ma aynaan helin macluumaad ku saabsan saamaynta goor wanaagsan tsunami badda iyo halista dhulka abuuray ama size of channels la beddelo nooca baaxadda iyo saadaasha this natiijooyinka ka dhici doona dhulgariir ka dib? Wadada kama dambaysta ah ayaa loo doortay shantii meeloodba. Sidee waxtar u leh khatarta dhulgariirka / tsunami ee doorashadan? 8 milyan oo qof oo ku nool West Island Istanbul gacanta dhaawaca dhulgariirka, jawaab degdeg ah, kala soocid, aaska, nafaqada, gaadiidka ka dib, waxaa qaabeeyey baahida ammaanka? Miyuu miyuu jiraa maaraynta maareynta maareynta miiska? Ma dhulgariir oo keliya, ayaa ku dhow inuu deriska ama masiibooyinka kale ee dabiiciga ah ee Badda Madow ee Romania iyo Bulgaria ee tigoodu nuclear jira haddii ay dhacdo hawo nuclear ee Fukushima ama qarax Chernobyl-sida dhici doonaa ka dib markii qaxidda degdegga ah ee 8 million in la qaban karaa? Haddii aan ka fekero geeddiga duufaan Maraykanka fuliyeen loogu diyaar anshax weyn oo xagaaga kasta oo aan isticmaalo si ay u arkaan dadkeena lagu qaban karo gacanta ee noocan ah ee xaaladda ayaa Weligay ma arkin ilaa maanta? Sidee waxaan ka adkaan masiibooyinka dabiiciga ah ha kulanka derby ee 30-40 kun oo qof in aan tixgelin doonna sida dhaafiyay halbowlaha ugu weyn ee juqraafiga ee jasiiradda, xirma this ee dhaqdhaqaaqa? Iyada oo la tixgelinayo qaybta badda ee hoose ee gaadiidka ee Istanbul, sidee baa loo xirayaa? Qaybta gaadiidka badaha ee gaadiidka maalinlaha ah ee Istanbul ayaa aad u hooseeya. (Kaliya 13 kun kiilo ee 350 million oo qof oo maalintiiba ah ayaa la siiyaa badda.)
WAXYAABAHA WAXYEELADA KALE
Saameynta xun ee Mashruuca Channel Istanbul iyo mashaariicda cusub ee Marmara in la keeno badda gudaha, Marmara, ayaa soo saari doona saynisyahanno. Marka la soo koobo, ciddida ugu dambaysa waxaa lagu xiri doonaa godadka badda Marmara, oo weli dhimanaya. Dhibaatooyinka kanaalka kaniisada Montreux waa arrin gooni ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaan dhihi karnaa inay uur leedahay natiijooyin halis ah. Dhab ahaantii, kanaalka ayaa dhab ahaantii burburinaya qeexidda Baqaha Turkiga, oo ah saldhigga Heshiiska Montreux.
Mashruucan, Turkey ee warshadaha, dhaqaalaha, Gaadiidka iyo qaybta adeegga, gaar ahaan dalxiiska, in gaaban, dhaqaalaha reer galbeedka dusha Marka Island Istanbul noqon doonaa nuglaanta geopolitical Turkiga, iyadoo dadka ka mid ah 8 million. Mustaqbalka waxaa jiri doona dhibaato weyn ama dagaalka sii jiho kasta laga qabto guriga halista aad u sarreeya oo kiiloomitir 1600, mustaqbalka ee jasiiradda this, ma aha oo kaliya in Istanbul, saamayn doonto oo dhan Turkey. Waa in aynaan iloobin khibradaha qadhaadh ee Balkan iyo Dardanelles Wars.
Isha: www.aydinlik.com.t waa
Gaadiidka iyo Nabdoonaanta Nolosha Nalalka Iftiiminta ee Wadada Hatay Ring…
Jasiiradda 3 oo laga sii daayo Channel-ka
Gaadiidka Wajiyaha Wajiyihiisu ahaa Cafe on Cunda Island (Video)
Jasiiradda Maal-gashiga iyo Aagga Warshadaha si loo dhiso Trabzon
Dhaqanka iyo Jasiiradda Taariikhda Gobolka Saldhiga (Sawir Sawir)
Jasiiradda Maalgashiga iyo Tareenka Tareenka
Qof walbana wuxuu jecel yahay inuu raaco jidka Baaskiilka